Umtya werabha wegwebu unezinto ezahlukeneyo. Isetyenziswa kakhulu yi-EPDM. Umzi mveliso wethu ubonelela ngemigca yokutywina ekumgangatho ophezulu, efanelekileyo kuzo zonke iintlobo zeminyango kunye neefestile, ezinje ngeengcango zomthi, iingcango zentsimbi, ucango lokhuseleko, amasango ahambayo, iingcango zokutyibilika, iingcango zemoto njlnjl. unayo ikhathalogu phantse engenasiphelo yerabha esikiweyo kunye neefom, kubandakanya amanqanaba entengiso kunye namabakala emilinganiselo ye-BS, iingcali kunye neerubber eziqhelekileyo kubandakanya iViton, Neoprene, Nitrile, Silicone, EPDM, iziponji kunye nogwebu. Uluhlu lwethu lobukhulu lukhulu kwaye sinokusika kubungakanani ngokwe-odolo nganye apho ufuna khona. Ukuba unemfuno ekhethekileyo, nceda unxibelelane nathi.